Dowlada Turkiga Oo Ciidan U Direysa Somalia | KEYDMEDIA ONLINE
Dowlada Turkiga Oo Ciidan U Direysa Somalia
Nairobi (Keydmedia) - Wakaaladaha wararka Dowladda Turkiga war lagu qoray ayaa lagu sheegay in Dowladda Turkiga ay damacsan tahay hal batalyan oo ka mid ah ciidamadeeda sida gaarka ah u tababaran inay u soo dirto gudaha wadanka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo hay'ado ka socda dalkaasi ay ka wadaan howlo lagu gargaarayo dadka ay abaaruhu ku habsadeen.
Sarkaal ka tirsan ciidamada Milateriga Dowladda Turkiga oo u waramayay wakaaladda wararka Anatolio ayaa sheegay in qorshaha dowladiisu ciidamo gaar ah ugu direyso uu yahay mid ku borosees, wuxuuna sheegay in marka QM ogolaato ciidamada ay Soomaaliya ay u soo dirayaan si dhaqsi ah ay ku tegayaan gudaha wadanka Soomaaliya.
Waxa uu sheegay sarkaalkaasi in dowladda Turkiga ay codsaneyso ciidamadeeda sida gaarka ah u tababaran hal batalyan oo ka mid ah inay dooneyso sidii ay u ilaalin lahaayeen shaqaalaha ku howlan samatabixinta shacbiga Soomaaliyeed ee abaaraha la il daran, dib u dhiska wadanka ay la degeen dagaalada sokeeye iyo howlo kale oo fara badan.
"Howlaha Dowladda Turkiga ka wado caasimada wadanka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho waa mid aan looga maarmin in la xaqiijiyo dhinaca amniga" ayuu yiri sarkaalkaasi ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Dowladda Turkiga oo dhinaca kale sheegay haatan in ammaanka shaqaalaha gargaarka Turkiga ay ilaaliyaan ciidamada AMISOM, taasi oo uu sheegay in markaan uu soo kordhayo culeys dhinaca nabadgelyada ah.
Dhinaca kale sarkaalka ayaa waxa uu ka digay howlgallo ka dhan shaqaalahooda jooga magaalada Muqdisho in waxyeello ka soo gaarto kooxaha argagixisada ah ee ku sugan magaalada Muqdisho, kuwaasi oo dhowaan qaraxyo ka fuliyay xarun imtixaano looga qaadayay arday deeq waxbarasho ka heshay wadanka Turkiga, halkaasoo xiligaasi ay ku sugnaayeen 3 sarkaal oo ka trisan dhinaca Waxbarashada dalkaasi.